(Xog Cusub);-Waa Maxay Sababta loo adkeeyay amaanka Villa Soomaaliya, Maxaase ka jira in Weerar lagu yahay? | AllJubbalandnews
(Xog Cusub);-Waa Maxay Sababta loo adkeeyay amaanka Villa Soomaaliya, Maxaase ka jira in Weerar lagu yahay?
Amaanka xaru nta Madaxtooyada Soomaaliya ayaa si aad ah loo adkeeyay , waxaana lagu soo kordhiyay ciidamo kale oo dheeraad ah oo xaqiijinaya amniga xarunta Villa Somalia, , waxaana ciidamada ugu badan la dhoobay Albaabada Xarunta.
Ciidamada Dheeraadka ah ayaa intooda badan look ala qeybiyay Albaabka hire ee Madaxtooyada Soomaaiya iyo Albaabka dambe ee Xarunta ee kasoo baxa dhanka Isgoyska Forolnsa , waxaana Ciidamadu ay muujinayaan Feejignaan dheeraad ah .
Waxaa jirta Cabsi ku aadan weeraro la sheegay in ururka al-shabaab ay ku qaadaan xarunta madaxtooyada Somaaliya oo maalmahaan noqotay mid saxmad ama ciriiri ah, isla markaana ay si aad ah ugu soo bateen Siyaasiyiinta xil doonka ah iyo wasiirada Xukuumada Soomaaliya .
Wararka qaar ayaa sheegaya in tan iyo Markii Madaxweynaha Soomaaliya uu xilka Ra’isul wasaaraha Soomaaliya uu u magacaabay Xasan Cali Kheyre inay soo badanayeen mashquulka iyo cariiriga Madaxtooyada Soomaaliya .
Ciidmada ayaa la sheegaya in qaarkood ay Bara koontarool ooh or leh ay ka smaeeyeen gudaha Madaxtooyada gaar ahaan wadad soo gasha waxaana arintan loo sababaynayaa inay jiri karaan gaadiid kusoo dhex dhuumaleysan kara kuwa madaxtooyada ka shaqeeya .
Al-shabaab ayaa hore Weerar uga fuliyaya Xarunta madaxtooyada Soomaaliya xilligii dowladii Xasan Sheekh Maxamuud inkastoo uu ka bad baaday , waxaana jira warar hoose oo tilmaamayaa in ay mar kale qorsheynayaan inay weeraraan xarunta.